Intee in le'eg ayaan nabad ku jirnaa labaatan sano ka dib Sebtember 11? Dareenka leh!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wtn » Intee in le'eg ayaan nabad ku jirnaa labaatan sano ka dib Sebtember 11? Dareenka leh!
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan • Wtn
Dr. Peter Tarlow wuxuu la wadaagayaa fikirkiisa ku aadan isku dheelitirka suuqgeynta dalxiiska iyo baahiyaha amniga
Socdaalka maanta aad buu uga adag yahay sidii ay ahayd labaatan sano ka hor. Dhab ahaantii, warshadaha socdaalku aad iyo aad bay isu beddeleen oo ku dhawaad ​​wax kasta oo laga sheegay waxay ku dhowdahay isla markiiba duugoobay. Labaatan sano ka hor, wax yar baa malayn kara waxyeelada dhaqaale iyo dhimashada ee COVID-19 sababay, ama xakamaynta bulshada ee masiibada keentay. Si wax loo muujiyo, Sebtember 11, 2001, in ka badan 3,000 oo qof ayaa ku dhintey hal maalin. Hadda da'da COVID-19, masiibada ayaa dishay in ka badan 4 milyan oo qof.
The Dalxiiska Adduunka Network Madaxweyne, Dr. Peter Tarlow, wuxuu soo saaray warbixin miyir qabta oo ka tarjumaysa 20 sano laga soo bilaabo Sebtember 11, 2001, iyo sida adduunka socdaalka iyo dalxiisku isu beddelayey.
Inkasta oo dadka badankiisu ay weli xusuustaan ​​maalmahaas murugada leh, haddana waxaa jira jiil dhan oo dhashay wixii ka dambeeyay Sebtember 11, 2001. Iyaga 9/11 waa dhacdo taariikhi ah oo dhacday waqti hore.
Faafida 2020-21 COVID-19 wuxuu u abuuray caqabado cusub dalxiiska. Dad badan oo da 'yar ma qiyaasi karaan adduunka safarka iyada oo aan lahayn xannibaadyo aad u fara badanna ma oga in saldhigga xannibaado badan oo safarkeenna ay xididdada u leeyihiin wixii dhacay Sebtember 11, 2001.
Labaatankii sano ee la soo dhaafay, xirfadlayaasha dalxiiska iyo socdaalka ayaa ogaaday in mala -awaalkii hore ee ahaa “nabadgelyadu waxba kuma soo kordhiso” Nabadgelyada dalxiiska iyo booliska, oo mar ahaa ilmo -haynta dunida safarka iyo dalxiiska, hadda waa qayb lagama maarmaan u ah warshadaha.
Macaamiisha dalxiiska iyo kuwa safraya mar dambe kama baqaan amniga; waxay soo dhaweynayaan dhinac kasta, laga bilaabo tallaabooyinka la-dagaallanka argagixisada illaa arrimaha caafimaadka dadweynaha. Dadka socotada ah ayaa waxeey weydiiyaan suuqleyda, wax ka bartaan, oo u adeegsadaan tallaabooyinka amniga qeyb weyn oo ka mid ah go'aan qaadashada safarka. Intaa waxaa sii dheer, COVID-19, dadweynuhu waxay hadda u tixgeliyaan tallaabooyinka caafimaadka inay qayb ka tahay amniga dalxiiska.
Mid ka mid ah siyaabaha uu ku soo beegmay xilligan cusub ee nabadgelyadu waa kobcinta ciidammada ammaanka ee gaarka ah (oo sidoo kale dunida qaarkood looga yaqaanno ciidammo booliis oo gaar ah).
Nabadgelyada khaaska ah, oo ay la socdaan TOPP-yada (booliska iyo adeegga ilaalinta ku-wajahan dalxiiska) ayaa hadda noqday waxyaabaha lagama maarmaanka u ah warshadaha dalxiiska ee guuleysta. Xaqiiqadani waxay si gaar ah run ugu tahay waddamada, sida Mareykanka iyo qaybo ka mid ah Laatiin Ameerika, halkaas oo ay ka jirto dareen ka dhan ah bilayska oo ay weheliyaan mawjadaha dembiyada ee sii kordhaya iyo meelaha u dhow dhow ilaalinta.
In kasta oo ciidamadan badbaadada gaarka loo leeyahay aysan had iyo jeer xaq u lahayn in la xiro, waxay bixiyaan joogitaan iyo waqti jawaab degdeg ah.
Sidaas oo kale, oo ah xilli ay sii kordhayaan hubsiimo -darrooyinka siyaasadeed iyo dhaqaale, amniga gaarka ah ee meelaha dalxiiska qaarkood ayaa noqday ikhtiyaar la tixgeliyo.
Waxa kale oo ay noqotay ikhtiyaar in lagu tixgeliyo dawladaha magaalada ee soo wajahay rabitaanka dadweynaha ee badbaadinta iyo ka -noqoshada culaysyada culus ee canshuuraha. Labaatankii sano ee la soo dhaafay, dadweynuhu waxay filayeen nooc ka mid ah amniga oo aan ahayn garoomada diyaaradaha oo kaliya laakiin meelaha sida dukaamaysiga, meelaha madadaalada/jardiinooyinka, xarumaha gaadiidka, hoteelada, xarumaha shirarka, maraakiibta dalxiiska, iyo dhacdooyinka isboortiga.
In kasta oo horumar badan laga sameeyay amniga dalxiiska iyo TOPP -yada, haddana waxaa jira wax badan oo la qabanayo.
Sidii aan u ahaan jirnay warshadaha dalxiiska tobankii sano ee la soo dhaafay
Waxaa laga yaabaa inaysan jirin qayb ka mid ah dalxiiska oo adduunka oo dhan fiiro gaar ah siisay sida warshadaha diyaaradaha. Labaatankii sano ee la soo dhaafay waxay lahaayeen kor u kac iyo hoos u dhac xagga warshadaha duulimaadyada, iyadoo 2020 uu ahaa hoos u dhaca ugu weyn ee warshadaha. Shaki kuma jiro in shirkadaha duullimaadyadu ay qayb muhiim ah ka yihiin dalxiiska: iyada oo aan la helin gaadiid cirka, aagag badan ayaa si fudud u dhinta, taraafikada hawaduna waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ganacsiga dalxiiska firaaqada ah iyo sidoo kale ganacsiga, safarka ganacsiga, iyo dhoofinta alaabta.
Socdaalka hawada maanta aad buu uga yar yahay siduu ahaa kow iyo labaatan sano ka hor ama xitaa laba sano ka hor. Safarro badan ayaa isweydiiya haddii dhammaan tallaabooyinkan ay yihiin kuwo daruuri ah ama ay la yaaban yihiin inayna noqon karin kuwo aan caqli -gal ahayn, wax dhumis ah, oo aan micno lahayn. Qaar kale waxay qabaan aragti ka soo horjeeda. Da'da cudurrada faafa, amniga safarka hawada ma aha oo kaliya sugidda diyaaradda, laakiin sidoo kale waa hubinta in boosteejooyinka ay nadiif yihiin oo maaraynta alaabtu aysan faafin caabuqyada.
Ma aha oo kaliya xeerarka cusub ee amniga ayaa nolosha ku adkeeyay dadka socotada ah, laakiin sidoo kale qaabab badan oo adeegga macmiilka ayaa hoos u dhacay. Laga soo bilaabo cuntada ilaa dhoolla -caddaynta, shirkadaha duullimaadku si fudud bay u bixiyaan oo inta badan waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo danaynaya habka ay ula dhaqmaan dadweynaha. Sidaa darteed, waa wax laga xumaado in wax yar laga qabtay amniga gaadiidka cirka. Macaamiil aad u badan ayaa isweydiiya in amniga diyaaradda ay ka falcelin badan tahay firfircoonida.